मनोरञ्जन – Page5– BIG FM 101.2 MHz
Home » मनोरञ्जन (page 5)
बिग न्यूज् पोखरा, १० फागुन । नेपालमा तीन पुस्ते अभिलेख राख्ने सरकारी चलन चलेको धेरै वर्ष भैसक्यो । र, अझैपनि यहि चलनले निरन्तरता पाईराखेकै छ । फिल्म शत्रु गतेको पोस्टर र अन्य प्रचार सामाग्री हेर्दा लाग्छ, यो फिल्म पनि तीन पुस्ताको कथामै बनेको छ । मदनकृष्ण–हरिवंशको पहिलो पुस्ता, दीपकराज गिरी अनि दिपाश्री निरौलाको दोस्रो पुस्ता र पल शाह–आँचल शर्माको तेस्रो …
को हुन् ‘सिरुमारानी’की सिरु ?
बिग न्यूज पोखरा ९ फागुन । पोखराको बजारमा अहिले नाटकको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ । खासगरि नाटकघर निर्माण पछि भएको पहिलो नाटक मञ्चन र यसका कलाकारहरुलाई लिएर बजारमा चियागफ हुन थालेका छन् । गन्धर्व नाटकघरमा मञ्चन भैरहेको नाटकमा पाका कलाकारहरु माओत्से गुरुङ, प्रकाश घिमिरेसँगै नयाँ कलाकारहरुले पनि अभिनय गरेका छन् । नयाँ कलाकारहरुले पनि पुराना अनि पाका कलाकारहरुलाई माथ दिने …
रेम बिक पोखरा, ७ फागुन । दर्शकलाई मनोरञ्जनको ‘शतप्रतिशत ग्यारेन्टी’ दिने दाबा गर्दै फिल्म पञ्चेबाजाको यूनिटले प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिएको छ । फागुन ११ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने फिल्म पञ्चेबाजाको प्रचार अभियान अन्तरगत पोखरा आएको टोलीले यो दाबी पेश गरेको हो । ‘दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने कुरामा हामीले ग्यारेन्टी लिन सक्छौँ ।’ निर्देशक घनश्याम लामिछानेले भने–‘दर्शकले हामीलाई गाली अवश्य गर्नेछैनन् ।’ फिल्मको …
‘पद्मावत’ एक काव्य-दृष्य
महेश भण्डारी बलिउड गंगा सागर हो । कति डुबे, कति बगे । हिसाब किताब छैन । कति आए, कति गए । अन्दाज सम्भव छैन । सिनेमाको यही महासागरमा एउटा ब्राण्डको नाम हो संजय लिला बंशाली । ब्राण्ड भन्ने चिज कस्तो हो भने, यसलाई बनाउन गाह्रो । जोगाउन झन् गाह्रो । त्यसलाई उकास्न झन् झन् गाह्रो । निरन्तरको संघर्ष, मौलिकता र …
‘हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्ट’को बुटवल अडिसनबाट ६ जना छानिए
बिग न्यूज पोखरा, १४ माघ । हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्टको बुटवल अडिसन सकिएको छ । गत शनिबार भएको अडिसनमार्फत प्रतियोगिताका लागि बुटवल र आसपासका क्षेत्रबाट ६ जना छनौट भएको आयोजक एपी इन्टरटेनमेन्मटले जनाएको छ । बुटवल अडिसनमा प्रतियोगिताका लागि २६ जनाले अडिसनमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यो भन्दा अघिल्लो शनिबार पोखरामा भएको अडिसनमार्फत कम्पनीले प्रतियोगिताका लागि २० जनालाई छनौट गरेको थियो …
नायिका पूजा र निर्देशक सुदर्शनको ‘रामकहानी’
बिग न्यूज पोखरा, ८ माघ । फिल्मको नाम के हो ? थाहा छैन । यद्यपी शुरुमा माग्ने बुढा उर्फ केदार घिमिरेको पारिश्रमिक १० लाख । त्यसपछि ६ लाखमा जितु नेपाल मुन्द्रेलाई फिल्ममा अनुबन्धन । त्यस्टै मोटो रकममा विल्शन विक्रम राईलाई पनि अनुबन्धन । एकपछि अर्को कलाकारहरुको छनोट र पारिश्रमिक रेटबाट चर्चा फैलाउँदै आएका निर्माता पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापाले …
सरस्वती आदर्शकी सजिनाले जितिन् व्यापार मेलाको खुला नाच प्रतियोगिता
बिग न्यूज पोखरा, ६ माघ । पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा जारी सफल औद्योगिक व्यापार मेलामा आयोजित खुला एकल नृत्य प्रतियोगितामा सरस्वती आदर्श विद्याश्रम लामाचौरकी सजिना तिलिजा प्रथम भएकी छन् । ३२ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये पहिलो चरणबाट छानिएर उत्कृष्ट १० मा परेकी तिलिजाले निर्णायक मण्डलको अत्याधिक मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हात पारिन् । प्रतियोगितामा सेन्ट फ्रान्सिस स्कुल छिनेडाँडाका सेजल पुन दोस्रो भईन् …
बिग न्यूज पोखरा, ६ माघ । दोस्रो सिजनको हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्टको पहिलो अडिसन पोखरामा भएको छ । शनिबार पोखरामा भएको अडिसनमा कुल २८ जनाले सहभागिता जनाएका थिए । पोखरामा अर्कोपटक पनि अडिसन हुने आयोजक कम्पनी एपी इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ । अडिसनमा सहभागी जनाउनेहरुमध्ये पोखराबाट कुल २० जना प्रतिस्पर्धीहरुलाई कन्टेस्टका लागि फाइनल गरिने आयोजक कम्पनीका रबिन केसीले जानकारी दिए । पोखरामा …
दोस्रो ‘हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्ट’ तयारी तीब्र
पोखरा, २८ पुस । दोस्रो सिजनको ‘हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्ट’ को तयारी तीब्र पारिएको छ । । आयोजक एपी इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले ‘कन्टेस्ट’को तयारी तीब्र रुपमा अघि बढेको जनाएको छ । अहिले आवेदन फाराम खुल्ला छ । आयोजकले यो इभेन्टका लागि देशव्यापी आवेदन आह्वान गरेको जनाएको छ । यो इभेन्टको पहिलो अडिसन पोखरामा माघ ७ गते हुनेछ भने दोस्रो अडिसन बुटवलमा माघ १३ …
रेम बिक पोखरा, २० पुस । दोस्रो सिजनको ‘हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्ट’ हुने भएको छ । आयोजक एपी इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले विहिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि ‘कन्टेस्ट’को बारेमा जानकारी दिएको हो । आयोजकले ‘कन्टेस्ट’का लागि आवेदन फाराम खुलेको जानकारी दिएको छ । खासगरि नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ‘हस्पिटालिटी सेक्टर’का व्यक्तिहरुले यो ‘कन्टेस्ट’मा सहभागिता जनाउन पाउने आयोजकले बताएको छ । ‘अतिथी सत्कारको …